Iimpembelelo zeLorcaserin: Ingaba i-Lorcaserin powder iyasebenza ngokwenene ukulahlekelwa yintlungu? | AASraw
/Blog/Lorcaserin/Iimpembelelo zeLorcaserin: Ingaba i-Lorcaserin powder iyasebenza ngokwenene ukulahlekelwa yintlungu?
ezaposwa ngomhla 12 / 02 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo Lorcaserin.
i-lorcaserin powder, igama lomthi: uBelviq, izithako eziphambili:i-lorcaserin powder eluhlaza, esetyenziswa kunye nokutya kunye abanxibe impahla kunyanga ukunyanya, kuba Ukulahlekelwa ngamatyeMaxesha ngamanye amayeza anikwa ukunyanyisa ukunyanya okunxulumene ne-cholesterol ephakamileyo, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, okanye udidi lwe-2 yeswekile. I-lorcaserin i-lorcaserin eklasini yeziyobisi ezibizwa ngokuba yi-serotonin receptor agonists. I-lorcaserin powder isebenza ngokujolisa kweekhemikhali kwingqondo echaphazela ukutya.
Lorcaserin powder Overview
I-Lorcaserin yonyango lonyango elisetyenziselwa ukunceda abantu abadala abakhulu okanye abanomzimba ogqithiseleyo kunye neengxaki zonyango ezinxulumene nesisindo yehla emzimbeni kwaye uhlale ungabuyi kubuyisa ubunzima. I-Lorcaserin kufuneka isetyenziswe kunye nokunciphisa i-calorie yokutya kunye nesicwangciso sokuzilolonga.
Ukulahleka kwe-fat Lorasserin kwinqanaba lemithi ebizwa ngokuthi i-serotonin receptor agonists. I-Lorcaserin isebenza ngokukhulisa iimvakalelo zokuzaliseka ukuze kudliwe ukutya okuncinane.
La mayeza aya kwifomu yethebhulethi kwaye ithathwa ngamaxesha e-1-2 ngosuku, okanye ngaphandle kokutya.
Iziphumo eziqhelekileyo zecalcaserin ziquka intloko, isicathulo, kunye nentlungu. I-Lorcaserin ingabangela ishukela ephantsi yegazi (u-hypoglycemia) kwizigulane ezineesifo seswekile.
I-Lorcaserin inganciphisa ukucinga kwakho kwaye ibangele ukungcola. Musa ukuqhuba imoto okanye usebenzise umatshini ogqithisayo uze wazi ukuba i-lorcaserin ikuchaphazela njani.
Ubutyebi buba yintlupheko kumazwe afana ne-USA, i-UK ne-Indiya. Iiprojekti ze-WHO ezenziwa ngu-2015, malunga nabantu abadala abayi-700 baya kuncedwa kakhulu kwiikliniki. Ubuninzi bubunzima bezempilo karhulumente, ngaphaya kokukhubazeka ngokuchanekileyo kuhambelana nokugqithisa ngokweqile, kwaye kwandisa ingozi yezifo ezingapheliyo ezinjenge-hypertension, i-apnea yokulala, isifo sikashukela, isifo se-coronary disease kunye nomhlaza. Kucacile ukuba ukunyamezela kuyingozi kakhulu, kubeka umthwalo omkhulu kwezoqoqosho kwiinkqubo zempilo.
I-Lorcaserin powder isebenze njani kwi-Obesity?
Isilwanyana sisebenza ngokulawula ukutya - ngokukodwa ngokusebenzisa i-brain receptors ye-serotonin, i-neurotransmitter evuselela iimvakalelo zokuxhamla kunye nokwaneliseka. I-Serotonin nayo ibandakanyeka kwimvakalelo; ezininzi izidakamizwa ezichasayo zisebenza ngokuthintela ukubuyiswa kwakhona kwe-serotonin kwaye kugcinwe i-brain receptors ehlaziyeni. Abaphandi kwi-Arena bathi izidakamizwa zabo zenzelwe ukufumana kuphela i-serotonin receptors ezichaphazela ukutya.
I-Lorcaserin iphumelela njani yiyo?
I-Lorcaserin, esetyenziselwa ukudibanisa nokutya kunye nokuzivocavoca, iphumela ekulahlekeni kwexabiso elingu-12.9 lb (5.8 kg) xa kuthelekiswa ne-5.6 lb (2.5 kg) kunye ne placebo.3 Ngokomyinge, malunga ne-47% yezigulane ziya kulahla ubuncinane i-5% ubunzima bomzimba wabo (malunga ne-11.1 lb [5 kg]) xa kuthelekiswa ne-23% yezigulane ezitholayo indawobo (inombolo efunekayo ukuphatha [NNT] = 4) .1-3 Nge-22% yezigulane ziya kulahla ubuncinane i-10% yesisindo somzimba ngokumalunga ne-9% yezigulane ezifumana indawo ye-placebo (NNT = 7). Ukulahleka kobunzima kugcinwe, ngokuqhelekileyo, iminyaka emibini. Ukulahleka kwesisindo kubakho kwangaphambili, kwaye abo abangalahlekelwa yi-5% yesisindo somzimba zabo kwiinyanga ezintathu zokuqala akunakwenzeka ukufezekisa i-5% ukulahlekelwa ngamaviki e-52. Ukulahleka kwesisindo kubonakala kwizigulane ezine-type 2 zesifo sikashukela ezingathathi i-insulin, nangona kungenjalo. -4 Ukumisa i-lorcaserin emva komnyaka kukhokelela kwinzuzo yesisindo esiphezulu ngaphakathi kwe-2.2 lb (1 kg) yesiseko.1-3 Akukho uphando malunga nomphumo we-lorcaserin ngokufa, isifo seswekile, okanye ezinye iziphumo ezijoliswe zizigulane.
Uphononongo lubonisa, malunga nesiqingatha se-dieters esithatha i-lorcaserin unyaka kwisifundo salahlekelwa ubuncinane i-5% yesisindo somzimba, xa kuthelekiswa ne-20% ye-dieters eyathabatha ipilisi ye-placebo. Phantse omnye kwabahlanu abasebenzisi be-lorcaserin balahlekelwa i-10% okanye ngaphezulu komzimba wabo, xa kuthelekiswa nomnye wabasebenzisi be-placebo be-14.
Abantu abaqhubekayo kwiziyobisi iminyaka emibili bakwazi ukugcina ukulahleka kwabo bunzima kunokuba batshintshwe kwi-placebo emva komnyaka owodwa, umphandi uSteven R. Smith, MD, wase-Florida Hospital kunye neSanford-Burnham Institute utshela iWebMD.
tags: ukuthenga i-Lorcaserin powder, Lorcaserin powder
I-Lorcaserin powder: Zonke izinto malunga nokulahleka kweziyobisi
I-powder Obesity powder VS Cetilistat powder	Kuphi ukuthenga i-Testosterone Ukuphucula i-powder eluhlaza kwi-intanethi?